Te hianatra Prawns aho, aiza no hanombohako? | Avy amin'ny Linux
Te hianatra Prawns aho, aiza no hanombohako?
jsbsan | | fandaharana
Andao atombohy amin'ny fanazavana ny atao hoe Gambas:
Gambas dia tontolon'ny fampandrosoana Linux maimaimpoana mifototra amin'ny mpandika teny Basic miaraka amin'ny fanitarana zavatra, mitovy amin'ny Visual Basic ™ (fa TSY klone!). Miaraka amin'i Gambas, afaka mamolavola haingana ny rindran-tsary misy anao amin'ny QT na GTK + ianao, miditra amin'ny MySQL, PostgreSQL, Firebird, ODBC ary SQLite, mifehy ny rindranasa miaraka amin'ny DBUS, mandika ny programao amin'ny fiteny rehetra, mamorona Front End an'ny linux baiko, mamorona rindranasa tambajotra mora, manaova fampiharana 3D OpenGL, manaova fampiharana amin'ny tranokala CGI, mamorona fonosana fametrahana amin'ny fizarana isan-karazany, sns.
Lazao aminao fa afaka mahita kinova Gambas roa ianao: Prawns2 y Prawns3.
Ny Gambas3 no tena be indrindra, ary manoro hevitra anao aho hampiasa an'io satria mifantoka kokoa amin'ny fandaharana amin'ny alàlan'ny zavatra noho ny Gambas2, ankoatran'ny Gambas2, tsy havaozin'ny mpanoratra Benoît Minisini intsony izy io ary mampiasa Qt3 izay ao anaty "député".
1 Ahoana no hametrahako azy?
2 Ary mba hianarako ny fampiasana azy, aiza no hanombohako?
Ho an'ireo mpampiasa Debian / Ubuntu dia manana ppa hametraka azy ianao:
$ sudo add-apt-repository ppa: nemh / gambas3 $ sudo apt-mahazo fanavaozana $ sudo apt-mahazo mametraka gambas3
Azonao atao ihany koa ny manangona azy, avy amin'ny kaody loharano. Ampiharina amin'ny tranokalan'ny tetikasa ny fizotrany http://gambas.sourceforge.net/en/main.html, azonao atao ihany koa ny mahita azy hanazava amin'ny pikantsary amin'ny prawn cuso: fanazavana ny fanangonana ny kaody loharano
Ary mba hianarako ny fampiasana azy, aiza no hanombohako?
Misy tranokala maromaro azonao vangiana:
Pejy web an'ny Gambas2 sy Gambas3
http://www.cursogambas.blogspot.com.es: Làlana fanaovana prawn izay hapetrako ary manomboka amin'ny fiandohana miaraka amin'ny fahalalana fandaharana, manazava ny baiko lehibe, tadivavarana, ohatra, sns….
Ohatra amin'ny rindranasa tahiry, fampiasana lamina famolavolana, ary ohatra amin'ny sambo miaraka amin'i Arduino.
Ny Gambas3 Ide mihitsy dia mitondra ohatra tsara, vonona hampiasa. Raha te hahita ny kaody loharano dia tsy maintsy "tehirizo toy ny ..." ireo ohatra amin'ny fampirimana hafa, ary sokafy avy ao amin'ny fampirimana vaovao, hahitanao ny kaody loharano
gambas-es.org: Forum amin'ny teny espaniola, ahafahanao mijery hafatra maherin'ny 20.000 navoaka ary misy mpampiasa voasoratra anarana mihoatra ny 2000
Manana boky roa maimaim-poana ianao:
1) amin'ny teny espaniola: Prawns: Ity boky ity dia natao ho an'ny andiany 1.99, saingy afaka manampy anao betsaka izy io.
2) amin'ny teny anglisy: http://beginnersguidetogambas.com/: Ho an'ny kinova 2 fa fanehoan-kevitra momba ny andiany 3.
Izaho dia nanao fantsona iray tao amin'ny YouTube, izay nandefasako horonan-tsary fampianarana maro, ny ankamaroan'izy ireo dia nataoko tamin'ny gambas2, fa izy ireo koa manan-kery ho an'ny Gambas3:
Boky fampianarana vitsivitsy:
Bilaogy hafa ahafahanao mahita lahatsoratra misimisy kokoa momba ny udd:
Manantena aho fa nankafizinao izany, arahaba
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fandaharana » Te hianatra Prawns aho, aiza no hanombohako?
Misaotra namana, homeko ny anjarako ny fianarana, ny fahamarinana toa mahaliana, arahaba
Jereo ity programa antsoina hoe i-nex voasoratra ao amin'ny Gambas 3 ity, toy ny windows everest izy io, mampiseho ny fitaovanao sy ny rindrambaiko rehetra amin'ny interface graphique.
Napetrako tao amin'ny ubuntu fa tsy nahomby izy, ahoana ny fomba fiasa?
Gallux dia hoy izy:
Misy ny fizarana antsoina hoe Daxos izay mampiasa birao vita ao Gambas 3. Tokony ho solosaina loharano ambany no kendrena. Ny kinova lehibe dia mifototra amin'ny Ubuntu sy Rasperry Pi ao amin'ny Debian. Tsy mbola nanandrana aho, fa raha ny sary hitako dia tsara. Ny set Icon dia mitovy amin'ny iray ampiasaina amin'ny Haiku OS.
Mamaly an'i Gallux
Hadinoko ny nilaza fa misy fizarana gnu / linux hafa, izay nametrahana gambas3 ho fenitra, antsoina hoe Minino PicarOS «Diego», http://minino.galpon.org/es/descargas
Hadinoko ny nilaza fa misy fizarana iray hafa (ankoatry ny Daxos) izay efa nametraka prawns3 mialoha, dia antsoina hoe Minino PicarOs «Diego» izany.
Azonao atao ny misintona azy eto: http://minino.galpon.org/es/descargas
goaika dia hoy izy:
Salama, lahatsoratra tena tsara. Toa mahaliana tokoa ary mahatonga anao te hianatra. Te-hametraka fanontaniana aho: misy trano famakiam-boky ve hifehezana ny seranan-tsambo usb miaraka amin'ny makamba? Tamin'ny taon-dasa dia nanao tetik'asa ho an'ny mpampianatra aho ary mila mampiasa ny seranan-tsambo usb, izany no antony nahatonga ahy tao amin'ny vondrona nisy ahy nampiasa fotodrafitrasa hita maso niaraka tamin'ny tranomboky manokana sasany. Fa mety ho tsara tokoa raha afaka mampiasa an'ity sehatra ity ary tiako ho fantatra raha misy koa tranomboky na zavatra toa izany.
Mamaly an'i goaika
Misy tetik'asa mandeha ho azy ao an-trano, izay ampiasana ny seranan-tsambo USB:
Cuervo dia hoy izy:
Heveriko fa tsara ny mety ananany, fa ny fandikana ny fototra sy ny derivatives dia mamono ny masoko, manosika ahy hanandrana izany.
Mamaly an'i Raven
«Te hianatra Prawn aho. Aiza no hanombohako?»
Tsako, marina? Manana fiteny maro sy zavatra mahaliana maro hianarana… Prawn !!! !!!
Tsy misy olona, ​​tsia ...
Ary iza no amporisihinao?
@Jsbsan, izany ve no izy, izany no olana, Gambas tsy fandaharana * matotra * ary mbola ratsy kokoa aza, manimba ny fianarana sy ny fomba voalohany amin'ny fandaharana amin'ny alàlan'ny fanomezana hybrid RAD izay mamela am-pahatsorana be dia be ny tadiavina.
@Daniel: miankina amin'ny tianao hatao izany, mazava ho azy, fa amin'ny tsipika ankapobeny: C ++ (Qt, mangina), PHP stack, Python, Ruby… miankina amin'ny tadiavinao izany.
Python dia nanao tabataba be satria tsy scripted fotsiny fa koa mampiasa precompile izay mahatonga azy io ho haingana kokoa, manana tranomboky sy fifamatorana amin'ny fiteny hafa toy ny C ++ ho an'ny zavatra rehetra tadiavinao ary efa nisy ihany koa mifindra monina amin'ny Internet. Ny zavatra tsara indrindra momba ny Python dia ny kaody mitovy tsy misy fanovana kely dia miasa na eo an-toerana na amin'ny tontolo hafa, raha ny tena izy dia fitaovana fitaovana fitantanana ambaratonga maro no voalamina mivantana ao amin'ny Python ...
Java dia zavatra mahatsiravina hafa, efa nahita ny kaodinao ve ianao? Ny fomba famoronana kilasy sy fiasa? Ary ambonin'izany rehetra izany dia mandeha amin'ny milina virtoaly ... tsia, misaotra.
Miala tsiny? Manohana ny fampiasana C ++ ve ianao fa tsy Java?… Araka ny hevitrao, avy aiza ny ankamaroan'ny syntax Java? Ny fomba famoronana kilasy any Java dia toa voajanahary amiko raha mifandraika amin'ny OOP tsy toy ny C ++ izay namboarina mba hahafahan'ireo mpandahatra programa C mampiasa OOP, marina fa voambolana (manoratra andalana maro ianao) fa raha tianao zavatra haingana kokoa amin'ny kaody azonao ampiasaina ireo fiteny mandeha amin'ny milina virtoaly java, ity ny Ceylon ohatra, izay novolavolain'i Gavin King izay miasa ho an'ny Red Hat, amin'ny lalana any Java dia tsy misy asa (afa-tsy ho an'ny mpanangana) toy izany dia misy fomba.
Ary koa, mitaraina momba ny milina virtoaly java ve ianao? LOL dia iray amin'ireo zavatra tsara indrindra ananan'ny sehatra. Saingy tsy izany ihany, manohana ny fampiasana PHP ianao. Ny PHP no fototry ny fahitana amin'izao fotoana izao, raha ny fiheverako ny fanetren-tena dia fiteny noforonina ho an'ny olona izay tsy tena mpandahatra programa i PHP. Midika izany fa tsy matihanina izy ireo. Izay lazainao momba an'i Gambas fotsiny.
Fantatrao ve ny isan'ny rindranasa orinasa mandeha amin'ny milina virtoaly java? Ary tsy izany ihany, fa ny fampiharana birao maro hafa. Ny zava-misy tsotra fa Java-cross-platform dia mahatonga azy io ho sehatra fampandrosoana tsara.
Ao amin'ny Python sy Ruby dia tsy miresaka zavatra aminao aho, hitako fa tena fiteny tsara izy ireo, mazava, tsotra ary ilaina.
Mamaly an'i kalt
Ny tsirairay avy hampiasa izay mora indrindra ho azy ireo, fotoana.
cy assembler programmer dia hoy izy:
tsy mila manambara ny miovaova akory ianao
ary maninona no miresaka momba ny php
adala daholo izy eto
ny udkara dia tsy natao hianarana fandaharana
ary tsy hanao programa tsy matotra
ny udkara dia ny fanaovana ny programa fitantanan-draharaha mahazatra
ny farany aloha
ny interface interface database
ireo programa izay matetika tsy manompo afa-tsy orinasa / mpampiasa tokana
Mamaly amin'ny programmer an'i cy assembler
hey dia hoy izy:
lazao izany amin'ny google, izay mampiasa python ho fanampin'ny tetikasa siantifika maro hafa izay mampiasa azy, na programa toa ny bittorrent sy ny poketra bitcoin ofisialy
Mamaly an'i oyrad
"Gambas dia ny fanaovana ny programa fitantanan-draharaha mahazatra ho faran'ny farany ny interface ho an'ny mpampiasa ny tahiry, ireo programa kely izay matetika dia orinasa / mpampiasa tokana no ampiasaina"
Ary toa kely aminao izany?
Fabian Flores Vadell dia hoy izy:
"Gambas dia tsy fandaharana * matotra * ary mbola ratsy kokoa aza, manimba ny fianarany sy ny fomba voalohany amin'ny fandaharana amin'ny alàlan'ny fanomezana hybrid RAD izay mamela mazava be ny zavatra irina."
Marina izany Gambas dia tsy fandaharana matotra, raha ny tena izy dia fiteny, IDE bebe kokoa, mpamorona bytecode bebe kokoa, mpandika teny bebe kokoa. Ny programmer dia apetraky ny programmer ary ho matotra na tsia miankina amin'ny serieux ny programmer na tsia.
Ary tsy fitaovana RAD ... na mitovy amin'ny IDE misy endrika endrika (izany hoe tsy misy).
Momba izany dia tsy mahomby amin'ny fianarana ... koa. Ny fironana hanomboka hanoratra programa amin'ny alàlan'ny interface graphique dia tsy olana, fa kosa ny sosokevitra fampidirana karazana code rehetra amin'ny mpikarakara hetsika ny fanaraha-maso ny sary.
Fanamarihana: ny fanombohana ny interface graphique dia tsy zavatra tiako, fa ny metodoloj RAD izay mifototra amin'ny fivoaran'ny prototypes izay azo aseho amin'ny mpampiasa hahazoana valiny haingana dia mitombina. Ny IDE toa an'i Gambas dia tsy afaka mampianatra metodolojia, na dia tsy maintsy ekena aza fa azo natao tsara kokoa.
Saingy olana iray amin'ny tsy fanatanterahana RAD saika ny fitaovana REHETRA izay miantso ny tenany hoe RAD.
Momba ny zava-misy fa mamela be i Gambas irina ... miankina amin'ny tianao izany.
Ny haitao izay miasa ho fotodrafitrasa amin'ny Internet dia mamela zavatra maro irina: ny tcp / ip protokol stack dia lavitra be amin'izay zavatra heverina ho "matotra" (amin'ny endrika famolavolana).
Inona no azo lazaina momba ny C / C ++, ny olona dia biby mahazatra C ++ dia noforonina tao an-tsaina ny mpandahatra programa C. Ny fahasarotan'ny C ++ dia mahatsiravina ary misy andrana vaovao hanatsarana ny tolotra C ++ (na eo aza izany dia fanandramana izay efa ela be taloha): mandehana miteny, Mozilla Rust, ohatra. Raha tsy mahomby na tsy mandroso ireo be taona dia "misaotra" an'ireo mpandahatra fandaharana, ny filàna fifanarahana mihemotra, ary ny tombontsoan'ny varotra.
Gambas dia fanandramana hanao Visual Basic (6) ho an'ny Linux izay tsy klone. Ny fivoarany avy any dia tsara. Androany dia manolotra fampiasa maro izy (fa tsy ny rehetra, mazava ho azy) misy amin'ny fiteny toa ny Java, fa amin'ny fomba tsotra kokoa.
Amin'izany, Gambas dia mitovitovy amin'ny Python, ny tiako holazaina dia ny fomba fanao pragmatika: manandrana manome ny fiteny ireo fiasa izay hitan'ireo mpandahatra fandaharana fa sarobidy, na dia fiteny iray aza ny heterogenezy (io olana ao Gambas io dia kely noho ny an'ny Python. ).
Mikasika ireo hevitrao hafa: raha misy te-hanao fandaharana (amin'ny fomba tsy itiavanao olona) dia manome olana maro ny sosokevitrao:
C ++: tena sarotra sy mora hadisoana, mitaky asa bebe kokoa koa izany hahazoana valiny mitovy amin'ny fiteny hafa (oh Gambas) noho izany dia hanaparitaka ny demony ihany koa amin'ny ankamaroan'ny tranga.
Stack PHP: tsy tsara noho Gambas raha ny momba ny fahazaran-dratsy fandaharana ratsy, ny fampifangaroana kaody fandraharahana miaraka amin'ny kaody mpiorina amin'ny mpampiasa no natolotry ny PHP hatramin'ny voalohany tamin'ny famelana ny kaody hiditra anaty rakitra html. Sarotra kokoa ny mametraka sy manamboatra ireo fitaovana ilaina rehetra. Tsy tanjona ankapobeny (tsy afaka manao rindrambaiko birao ianao na farafaharatsiny tsy lojika izany).
Python: manohana paradigma 3 izay mety hampisafotofoto ny mpianatra iray ary mety hanery anao hanomboka amin'ny zavatra sarotra toa ny fahatakarana ny hevitr'ireo paradigma ireo. Tsy manana endrika kanto izy io, fa misy endrika mampiavaka azy. Mahery sy mandefitra tokoa izy io ka afaka manolotra ny mpianatra amin'ny fanamby ara-tsaina. Manohana azy dia manana vondrom-piarahamonina midadasika sy fandalinana izy io. Ankoatra ny fiezahana hampiseho fa ny fiteny tsirairay dia afaka manisy olana ary na dia fanamby lehibe aza ho an'ny mpianatra, Python miaraka amina antontan-taratasy mety dia toerana tsara hanombohana.
Ruby: manana olana mitovy amin'ny Python amin'ny lafiny paradigny tohanan'ny azy. Ny fandikana azy dia mety ho mazava kokoa ary mora kokoa ny mianatra raha toa ka nalainy (toy ny nandraisany zavatra maro) avy tao amin'ny Smalltalk, fa ny fanolorany tena amin'ny fiteny hafa dia mahatonga ny fianarana ny syntax tsy ho mora araka izay mety ho azy, ho an'ny mpianatra iray. Azo antoka fa tsy fiteny noforonina mba ho mora ianarana io, na dia somary mora kokoa noho Python aza izy io. Manana antontan-taratasy tena tsara sy vondrom-piarahamonina izay mahatonga azy io ho safidy tsara indrindra amin'ny fiteny voalohany.
Ny fiteny tokana fantatro izay namboarina tamim-pahendrena hanamorana ny fianarana, fa tsy fiteny akademika fotsiny dia ny Smalltalk, ho ahy ny safidy tsara indrindra ho an'ny rehetra raha mandinika ny fiteny sy ny fitaovana ianao, hatramin'ny antontan-taratasy hianarana hiaraha-miasa amin'ny Smalltalk it somary daty. Izy io koa dia manana vondrom-piarahamonina ahafahanao mianatra.
Raha dinihina ny sahan-kevitra, ny fampiasana Gambas hianarana fandaharana dia lojika tanteraka, indrindra raha efa nifandray tamin'ny kinova BASIC ilay mpianatra.
Ny fitaovana fandalinana tsara ho an'i Gambas dia tsy hita satria mbola zara raha misy sy tsy feno, saingy ny ezak'i jsbsan amin'io lafiny io dia mahatonga an'i Gambas ho safidy hianarana fandaharana (ho an'ny mpampiasa GNU / Linux, izany hoe hobbist) safidy iray hodinihina. Manana vondrom-piarahamonina ilaina amin'ny fianarana koa i Gambas.
Valiny tamin'i Fabián Flores Vadell
Toy ny mahazatra, +1, Fabian.
Malahelo anao izahay amin'ny forum.
Araka ny nolazain'izy ireo tao an-tanànako: «Tsy misy toerana ny fahalalana»
Ary ho an'ireo izay te hianatra fandaharana dia heveriko fa safidy ny handraisana izany.
Ireo rehetra izay nanao fandaharana miaraka amin'ny interface interface miaraka amin'i pyhton na Java, dia hiaraka amiko, fa amin'ny Gambas dia mora kokoa izany.
Averina indray, raha ny fiheverako ny fanetren-tena, ny hoe "mora" dia tsy midika hoe tsara na tsara kokoa. Miankina amin'ny lafin-javatra maro. Tetikasa fialamboly ve ny tetikasanao sa matihanina? Fampisehoana ambony ve? multiplatform?, sns ...
Miresaka momba ny GUI ihany koa, mbola tsy nahita ny JavaFX API ve ianao? Tsara ray, effets, css ary zavatra manintona maro, ary hivoaranao ao anatin'ny fotoana fohy.
Fa raha miresaka momba ny fanombohana fandaharana na fianarana ianao dia mieritreritra aho fa safidy mety i Python. Avy any dia handeha mankany C miaraka amin'ny Assembler ary avy eo amin'ny fiteny avo lenta hafa.
compilamanianco dia hoy izy:
na "mora" ny Java ho an'ny multiplatform dia tsy midika hoe tsara na tsara kokoa.
mora ianarana ny python dia tsy midika hoe tsara na tsara kokoa
Hevitra mahatsiravina izany, tolo-kevitra hanombohana
raha ny marina dia hevitra mahatsiravina daholo ny rehetra manomboka mianatra mamindra programa
Valiny amin'ny compilamanianco
Inona no resahinao ... tsy nilaza mihitsy aho hoe tsara kokoa ny Java. Tsy misy fiteny no tsara indrindra, miankina amin'ny tanjona daholo izany. Tsy azoko ihany koa ny antony ilazanao fa hevitra ratsy i Python amin'ny fiteny voalohany. Anjerimanontolo maro no mampiasa python hampianarana lojika sy algorithma, ampiasaina izy satria tsotra, mazava ary mifanaraka. Satria script izany dia tsy miraharaha ireo olana toy ny fanangonana ireo mpianatra. Ny tsy mila mampiasa rafitra raikitra hamoronana programa dia manome fahatsorana izay mahatonga ny mpianatra hifantoka amin'ny algorithma sy lojika.
Raha vao manana fahalalana momba ireo lohahevitra ireo ny mpianatra dia afaka manomboka amin'ny lohahevitra mandroso kokoa izy ireo. Ny fiteny tsara ahitanao ireo foto-kevitra ireo dia ny C. Ao amin'ny C ianao dia mianatra manao zavatra amin'ny tanana, rafitra, tondro, sns. Fantatrao izao ny C, tonga ny fotoana hahitanao torolàlana mankaleo kokoa izay manakaiky ny masinina, fiteny fitambarana hahalalana ny fomba fiasan'ilay masinina.
Ankehitriny satria manana ny lojika, ny rafitra, ny algorithma ilay mpianatra ary fantany ny fahasarotan'ny torolàlana ambany dia vonona hianatra fiteny avo lenta izy.
Amiko, ity fomba fampianarana ity dia toa mety, tsy manome ny hevitrao momba ny antony tsy izy, miteny fotsiny ianao fa toa hevitra mahatsiravina izany. Te hahafantatra ny hevitrao aho.
Olaf dia hoy izy:
Tena vaovao aho amin'ity forum ity ary indrindra indrindra tiako ny fitaovana elektronika sy zavatra maro eo amin'izy ireo. Voalohany, rehefa nanapa-kevitra ny hiala amin'ny varavarankely aho ary hifindra any Linux, dia tsy nanolotra tolotra tsara kokoa noho ny prawn handresy ny Bit-ko. Hilalao amin'ny alàlan'ny seranan-tsambo mifanitsy ahafahako manao izany amin'ny alàlan'ny USB… .ny fandrosoana sy ny fahatelo hahafahako manatanteraka ny tetikasako dia manana lamba be aho. Noho izany dia mino aho fa nanome famporisihana ahy i Gambas hanohy amin'ny fandaharana tsy toa ahy nitranga tamin'ny fiteny hafa aho nahita zavatra ihany tamin'ny farany ary zavatra hafa no nivoaka, ohatra ny dingana VB6 .net sy maranitra ary tsy azoko intsony ny knob ary nijanona ny tetikasako. Misaotra ny Linux sy ny sambo azoko afaka manohy aho. Famihinana ho an'ny rehetra
Mamaly an'i olaf
Raha tianao ny Visual Basic 6, dia mety aminao izany. Raha tsy izany (toy ny tranga misy anao) dia ampiasao milamina ny EMACS na VIM.
emacs sy vim dia tsy fiteny fandefasana programa ...
Heveriko fa ny VB6 IDE dia mitovy amin'ny lahatsoratra "somary mitovy amin'ny Visual Basic ™"
Raha ny fahitako azy, na dia tsy tiako aza ny makamba, ny tontolo iainana izay manampy ny olona hanomboka amin'ny fandaharana ary mamporisika ny fampandrosoana ny fampiharana dia vatosoa. Fampandrosoana RAD dia manana ny lazarus sy qtcreator tena tsara isika.
Ho ahy manokana, ny tena halako indrindra amin'i Gambas dia ny tsy fampiasàna endrika «mpandika teny», tsy hitako ny lojika, azo lazaina fotsiny fa nanana maritrano fampivoarana ratsy izy io, ka sarotra be ny nitondrana azy amin'ny sehatra hafa.
Niezaka ny hianatra lazarus aho (raha ny marina, efa nanao programa teto amin'ity tontolo ity aho), saingy zara raha nahita fampahalalana na boky torolàlana (misy iray toa tsara be, nefa mandany vola be ary voasoratra amin'ny teny anglisy). Manasa anao aho hanao lahatsoratra momba ny lazarus izay ilazanao hevitra momba izay hahitanao vaovao hianarana azy.
"Raha ny tenako manokana, ny tena halako indrindra amin'i Gambas dia ny tsy fampielezana endrika" mpandika teny ", tsy hitako ny lojika, azo lazaina fotsiny fa nanana maritrano fampivoarana ratsy izy io, maninona no sarotra be ny nitondra azy amin'ny sehatra hafa. "
Namboarina sy novolavolaina hatrany ifotony mba ho fitaovana fampandrosoana ho an'ny rafitra GNU / Linux. Tsy nisy mihitsy ny fikasana hamela azy io hiampita sehatra, noho izany ny firafitry ny fampandrosoana ratsy dia hadisoan'ny fankasitrahanao.
Izaho dia miafara amin'ny fampahafantarana anao foana, maneso xD
Saina mihaona mihaona ny saina ...
bsdambambero dia hoy izy:
mamirapiratra tokoa izy ireo
toy ny raharaha maizina
Valio i bsdgambero
Jean Pierre dia hoy izy:
Manaova fampianarana momba ny fanaovana tetikasa miaraka amin'i CMake sy Vala, raha tianao dia hanampy anao amin'ny lafiny teknika aho ...
Valiny tamin'i Jean Pierre
Lahatsoratra mahaliana, na dia tsy nanana marika toy ny OOP na fandaharana aza izy io.
Ny hoe "somary toy ny fototra" dia mety hanamora ny fanombohan'ny maro ny fampivelarana ny fampiharana eo ambanin'ny Linux, sa tsy izany?
Mitovy hevitra aminao aho .
Raha ny marina dia hampakatra ny sasany amin'ireo fangatahako ao amin'ny bilaogy aho mba hahitanao izay zavatra azo atao.
Ismael dia hoy izy:
Tsy tanjoko ny hanafintohina fa ny milaza ny marina, tsy hitako izay mahasoa amin'ny fianarana fiteny tsy matotra toa an'i Gambas (mahita fa ny syntax BASIC tamin'ny taona 80) dia mila an'i Microsoft hitory an'i Gambas amin'ny fampiasany ny tenin'izy ireo VB.
Manana ho avy ireo fiteny ireo.
Mamaly an'i Ismael
Ny sintom-panafody an'ny karazana Basic an'ny taona 80?
Heveriko fa tsy fantatrao Gambas3 ...
Navoakanao tamin'i Python sy Ruby izany, ireo sosokevitra hafa omenao dia mampiseho fa tsy nandany 5 minitra akory ianao hieritreretana hoe inona ny olana atolotray ho fiteny voalohany.
Misaotra betsaka anao nampahafantatra an'ity tontolo ity, ho an'ireo izay efa nampiasa basic visual, dia ho hitanao fa mora izany
mahaliana ny boky torolàlana iray amin'ny endrika epub
tibiyacks dia hoy izy:
ry jbsan malalako efa ela no nanarahako ny fampianarana anao manokana tiako ny sambo, noho ny fanamorana ny fandaharana sy ny fanaraha-maso sasany, mazava ho azy fa mbola afaka manatsara ny maritrano saingy amin'ny linux dia safidy fandaharana mety.
Mamaly an'i tibiyacks
Nisy fotoana nangatahina tamiko hampiasa Visual Basic, satria rindrambaiko wildebeest ihany no manana ny masinako, nanao zavatra tamina prawn aho.
Marina fa tsotra ny sehatra roa raha manao zavatra, saingy tsy ampy amin'ny Espaniola ny antontan-taratasy.
Izaho manokana dia tsy nandinika an'ity fomba ity tena fandaharana ary raha te hianatra tena ilaina ianao amin'ny programa rehetra ary tsy misy tsara noho ny c / c ++, emacs ary gcc
Mamaly an'i poorotaku
Eto izy ireo dia mamafa ny hevitra? Fanehoan-kevitra taloha kelin'izay ary tsy hita intsony ireo fanehoan-kevitra roa ...
Amin'ny debian stable dia tsy ilaina ny manampy ny ppa hametraka gambas3.
Ho an'ny ambiny, lahatsoratra tsara.
Miarahaba anao JSBAN. lahatsoratra tena tsara, mpandefa programa makamba aho, ary ao amin'ny forum momba ny makamba aza aho. Tena tsara ny fanazavanao. Raha ny fahitako azy, ny prawn dia fiteny iray hanombohana ny tontolon'ny fandaharana, fa raha manokana ho an'ny tetikasa matotra aho dia heveriko fa tsy hanome sosokevitra ny saho. Raha te-Program ho varotra matihanina ianao dia misy fiteny hafa, C, C ++, PHP, JAVA, JS, PYTHON. mahafaly
mijery anao amin'ny windows 7 sy ny firefox
Inona ny hevitrao? Tsy amin'ny fotoana rehetra dia afaka amin'ny Linux malalako aho.
Aza mandany fotoana miaraka amin'i PAJEREADAS.
Shordi dia hoy izy:
Ny repository nemh dia tsy miasa intsony. Raha hametraka ilay trano fitahirizana vaovao (ary antenaina azo antoka) tsy maintsy ampiasainao:
$ sudo apt-mahazo mametraka gambas3
Mamaly an'i Shordi
Desktop Linuxero tsara indrindra: Febroary 2014 - Vokatra
Kalahari sy Mate-with-Mint kisary ho an'ny kanelina (averina)